दुगड समूह : ऊर्जाका परियोजनामा लगानी बढाउँदै | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल दुगड समूह : ऊर्जाका परियोजनामा लगानी बढाउँदै
केएल दुगड समूह
१ सय ३७ वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको दुगड समूह नेपालको एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना हो । यस समूहमा उत्पादन क्षेत्रका २० भन्दा धेरै, ऊर्जाका ३, घरजग्गाका २ र अन्य ६ गरी कुल २० कम्पनी छन् । यसबाट समूहले वार्षिक रू. २० अर्बबराबरको व्यवसाय गर्दछ ।
समूहले २० मेगावाटको तल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनासहित सिमेण्ट, खाद्य, खानी र तेल उद्योगमा लगानी बढाउने तयारी गरेको छ । समूहले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसअनुसार उसले विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा लगानी बढाउँदै छ । मुख्यगरी खाने तेल, गेडागुडी र सवारीसाधनको कारोबार गर्ने समूहभित्र केएल, एमभी र एचसी दुगड समूह छन् । यसमध्ये केएल दुगड समूहलाई कृष्णलाल दुगड, एमभी दुगड समूहलाई मोतीलाल दुगड र एचसी दुगड समूहलाई हुकमचन्द दुगडले नेतृत्व गर्दछन् ।
समूहभित्रको केएल दुगडले मात्रै वार्षिक करीब रू. २० अर्बको कारोबार गर्दछ । एचसी र एमभीको कारोबार छुट्टै छ । दुगड समूह अहिले सिमेण्ट उत्पादनका लागि लगानी थप्ने, दलहन व्यवसाय अझै धेरै विस्तार गर्ने र खाने तेल उत्पादन तथा ऊर्जाका परियोजनामा लगानी गर्ने रणनीतिअनुरूप सञ्चालित छ ।
दुगड समूहको इतिहास
चाँदमल दुगडले विराटनगरको हाटबजारमा कपडाको व्यापार शुरू गरेदेखि नै समूहको व्यावसायिक यात्रा शुरू भएको हो । लुनकरण दुगडले बुबाको व्यवसाय अघि बढाउँदै कृषि व्यवसायमा पनि हात हाले । त्यसपछि लुनकरणका चार छोराले व्यवसाय सम्हालेसँगै दुगड समूहको व्यवसायले नयाँ उचाइ पाएको हो । शुरूमा यो समूह टेक्सटाइल र कृषि उत्पादनको व्यवसायमा संलग्न थियो । समूहले क्रमशः यसलाई विस्तार गर्दै जुट निर्यात, स्टिल, चामल मिल आदिमा फैलायो ।
समूहको व्यवसायमा विविधता ल्याउन तोलाराम दुगड र उनका भाइ मोतीलाल दुगडको महŒवपूर्ण भूमिका छ । उनीहरू धरानबाट विराटनगर झरेर जुट प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेका थिए ।
६ दशकअघि नै मोतीलाल दुगडले खाद्यान्न खरीद गरी कृषकलाई नगद भुक्तानी दिने व्यवस्था शुरू गरेका थिए । नगद भुक्तानीको सो व्यवस्थाले समग्र कृषिक्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ ।
सन् १९६६ मा यस समूहले स्ट्रबोर्ड पेपर इण्डष्ट्रिज सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि चामल, तेल र स्टिल उद्योग शुरू भयो । त्यस्तै, सन् १९७२ देखि यस समूह अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत संलग्न रह्यो । ती सबै उद्योग दुगड समूहको व्यवसायलाई एक अलग स्थानमा पुर्‍याउन कोसेढुङ्गा सावित भयो ।
अहिले समूहको व्यावसायिक विरासतलाई एमभी, एचसी र केएल दुगड समूहले निरन्तरता दिएका छन् । समूह सन् १९६२ मा टीएम र एचसीमा विभाजित भयो । त्यसपछि सन् १९९१ मा टीएम दुगड पुनः टीएम र केएल गरी दुई समूहमा विभाजित भयो । सन् २०१५ मा मोतीलाल दुगडले टीएम दुगड समूहबाट छुट्टिएर एमभी दुगड समूह खडा गरे ।
दुगड समूहअन्तर्गतको केएल समूह, खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने नेपालको एक प्रमुख एवम् अग्रणी उद्योगको रूपमा स्थापित छ, जसले धारा खाने तेल, ज्ञान आटा, चामललगायत खाद्यवस्तु उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, मोतीलाल दुगडको परिवारले सञ्चालन गरेको अटोमोबाइलको व्यवसायलाई पुनःसंरचना गरेपछि हाल त्यसले एक अलग उचाइ प्राप्त गरेको छ । अर्कोतर्फ, मोतीलालले अघि बढाएको टीएम दुगड समूह जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजनामा छ ।
हाल यस समूहअन्तर्गत तीनओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । कुल २१ करोड रुपैयाँबराबरको लगानीमा हाल १ सय ५७ मेगावाटका तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, आफ्नो आगामी योजनाअनुरूप यस समूहले ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न एक अलग प्रकारको रणनीति तयार पारेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई आफ्नो आयोजनामा रोजगारी प्रदान गर्नेदेखि निर्माण ठेकेदारसम्म स्थानीयलाई बनाउने नीति उसले अबलम्बन गरेको छ ।
दुगड समूहको प्रमुख व्यवसाय
युनाइटेड सिमेण्ट इण्डष्ट्रिज दुगड समूहअन्तर्गतको एउटा प्रभाग हो । यो धादिङस्थित जुगेडीमा अवस्थित छ । हाल यस उद्योगले, साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेण्ट (ओपीसी)को व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेके छ भने चाँडै पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेण्ट (पीपीसी)को पनि उत्पादन थाल्ने तयारी रहेको छ । कम्पनीले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सिमेण्ट उत्पादन गरिरहेको छ । वातावरण प्रदूषणमा असर नपर्ने प्रतिबद्धताका साथ निरन्तर उत्पादन गर्ने यसको लक्ष्य छ । गुणस्तर उत्पादनप्रति सदैव प्रतिबद्ध युनाइटेड सिमेण्ट कम्पनीले आफ्ना उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गा ललितपुरस्थित लेलेबाट आपूर्ति गरेको बताएको छ ।
सन् २००१ मा स्थापना भएको कुमारी बैङ्क १५औं कमर्शियल बैङ्कको रूपमा स्थापना भएको हो । केएल दुगड समूहअन्तर्गत नरेश दुण्ड निर्देशक रहेका बैङ्कको मुख्य उद्देश्य ग्राहकलाई आधुनिक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्नु हो । बैङ्कले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्ड पनि जारी गर्छ ।
विकास फ्लोर मिल प्रालि
नेपालमा गुणस्तरीय आटा उत्पादन गर्ने कम्पनीको रूपमा विकास फ्लोर मिल पनि प्रमुख कम्पनीको रूपमा छ । यो उद्योग नेपालगञ्जमा छ । कम्पनीले ज्ञान र आशिर्वाद ब्राण्डको आटा बजारमा ल्याएको छ । यसले ज्ञान ब्राण्डको आटा, सुजी र ज्ञानभोग चक्की आटा उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, आशिर्वाद ब्राण्डको सुजी, आटा र लिटोको पीठो उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनी फूड एण्ड एग्रीकल्चर अर्गनाइजेशन (एफएओ)को सहआयोजनामा कृषि विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सन् २००६ मा सम्मानित बनेको थियो । त्यस्तै, विकास फ्लोर मिलले आईएसओ ९००१ः२००८ र सन् २००६, २०११ र २००३ मा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेको छ ।
ज्ञान एग्री वेयरहाउजिङ एण्ड कोल्याटरल म्यानेजमेण्ट
ज्ञान एग्री वेयरहाउजिङ केएल दुगड समूह र ग्लोबल आईएमईए बैङ्कबीचको संयुक्त लगानी (जोइण्ट भेञ्चर) कम्पनी हो, जसले नेपाली किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा उपलब्ध प्रचुर स्रोतलाई सही तरीकाले प्रयोग गर्दै यस कम्पनीले किसानलाई धितो र ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ । कृषि वस्तुको गुणस्तर जाँच तथा प्रमाणीकरण गर्ने, खरीदपछिको ग्यारेण्टी, कृषि वस्तु पुनः खरीद, गोदामको व्यवस्थालगायत सेवासुविधा यसले प्रदान गर्दै आएको छ ।
व्यवसाय र आगामी परियोजना
खाने तेल र खाद्यान्न
संयुक्त लगानीका व्यवसाय (जोइण्ट भेञ्चर)
ज्ञान एग्री वेयरहाउजिङ, केएल दुगड र ग्लोबल आईएमई बैङ्कको संयुक्त उपक्रम
एमभी दुगड समूहको आगामी परियोजना
जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी गर्दै आगामी ६ देखि ७ वर्षभित्र ५ सय मेगावाट विद्युत् उतपादन गर्ने लक्ष्य छ, जसमध्ये कुल २१ करोड रुपैयाँ लगानीमा हाल लिखु–ए २९, लिखु–१ ७७, लिखु–२ ५१ मेगावाट गरी तीनओटा आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
एमभी दुगड समूह, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रवर्द्धक पनि हो ।
हालको समयमा एमभी दुगड ब्रदर्सले दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स प्रालि र अटोमोबाइलको सम्पूर्ण कारोबार सम्हालेका छन् ।
सिमेण्ट, खाने तेल, खाद्यान्य र जलविद्युत् क्षेत्रमा थप विस्तारको तयारी छ ।
२० मेगावाटको तल्लो म्यादी जलविद्युत् निर्माण
केएल दुगड समूहको अनुमानित वार्षिक कारोबार २० अर्बरुपैयाँबराबरको हुने गरेको छ ।
एमभी ग्रुपअन्तर्गत १हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
केएल दुगड समूहको क्षेत्रगत उपस्थिति
स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रालि (धारा ब्राण्डको तेल उत्पादक)
सौरभ आयल मिल प्रालि
विकास आटा मिल प्रालि
सौरभ फूड प्रडक्ट प्रालि
प्रतिभा राइस मिल प्रालि
स्वस्तिक प्याकेजिङ प्रालि
ज्ञान फूड प्रडक्ट प्रालि
ज्ञान हर्बल प्रडक्ट प्रालि
युनाइटेड सिमेण्ट प्रालि
मनाङ टे«ड लिङ्क प्रालि (२० मेगावाट)
गायत्री हाइड्रोपावर प्रालि (६ मेगावाट)
नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर (३.५ मेगावाट)
केजे प्रपर्टिज एण्ड बिल्डर्स प्रालि (केएल रेसिडेन्सी लक्जरी होम्स)
एनपीके बिल्डर्स प्रालि
ज्ञान एग्री वेयरहाउजिङ एण्ड कोल्याटरल म्यानेजमेण्ट प्रालि
प्राइम कमर्शियल बैङ्क लिमिटेड
ट्राभल एण्ड टूरिजम
ओरियण्ट प्याराडाइज टूर्स एण्ड ट्राभल प्रालि
स्मार्ट एप्लायन्स– इलेक्ट्रोलक्स, स्काइवर्थ, अस्टर, फागोर, ह्वाइट वेष्टिङहाउस जस्ता ब्राण्डको एकमात्र एजेन्सी
सिमेण्ट, खाने तेल, तेलको बीउ, खाद्यान्य, पेपर्स, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड हाडवेयर सामग्री, रासायनिक मल, पेयपदार्थ, केमिकल्स
टीएम र एमभी दुगडको संयुक्त उपस्थिति
दुगड फुड एण्ड बेभेरेज प्रालि
नेपाल सालसिड आयल प्रालि
अमृत पल्सेस इण्डष्ट्रिज
निधि आयल इण्डष्ट्रिज
पूजा राइस मिल
पूजा दाल मिल
श्रद्धा फूड प्रडक्ट
कोहिनूर एग्रो इण्डष्ट्रिज
कोहिनूर राइस मिल
कामधेनु भेजिटेबल आयल इण्डष्ट्रिज
मङ्गलम् राइस मिल
दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स प्रालि (नेपालमा निशान मोटर्स र रोयल इनफिल्डको आधिकारिक वितरक)
एमभी दुगड समूह (महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा गाडी, जोन डियर ट्र्याक्टर र पियाजियोको आयातकर्ता)
कोहिनूर कोल्ड स्टोरेज प्रालि
शुभम् कोल्ड स्टोरेज
पान हिमालय इनर्जी प्रालि (७७ मेगावाट लिखु १)
ग्लोबल हाइड्रोपावर एशोसिएशन प्रालि (५१ मेगावाट लिखु २)
नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालि (२९ मेगावाट लिखु ए)
एचसी समूहको उपस्थिति
नेपाल फूड प्रडक्ट
एचसी मोडर्न इण्डष्ट्रिज
हुकम चन्द एण्ड सन्स